baabuur cunto Magic, taas oo ah shirkad-teknoolojiyad sare khaas u ah design, horumarka, wax soo saarka iyo iibinta baabuurta ganacsiga.
Shirkadda tixgeliyo R & D iyo hal-abuurka sida tartan core ay, waxaana uu aasaasay koox aad u fiican R & D iyo design, oo diiradda saaraya sirdoonka, qalabaynta, takhasuska, iyo Hadba.
Waxaan ku adkaysanayaan on abuurnimo madax banaan. Shirkadda ayaa helay in ka badan 100 shatiyada technology ee heer qaran, bixinta shakhsi xal dukaan mobile baahida macaamiisha, iyo caawinta macaamiisha dhiso falsafad ganacsi cusub.
Shirkadda waa soo saaraha ah xirfadeed ee dukaamada mobile shakhsi. waxyaabaha u daboolaan oo daraasiin ah noocyada sida baabuur dhakhso-cunto, gaariyo kala duwan jalaato, noocyo kala duwan oo gaadhi dubista, baabuurta outreach ganacsiga, baabuurta studio, iyo baabuurta ciddiyaha quruxdiisa.
ganacsi wuxuu daboolayaa fudud, cabitaanka wadada, wacyi, qalabka korontada, Alaabeynta guriga, warshadaha dhar, warshadaha qurxiyo quruxdiisa, warshadaha guryaha, dalxiiska iyo warshadaha kale. waxyaabaha lagu dhoofiyo Maraykanka, South Korea, Midowga Yurub, Bariga Dhexe iyo dalalka kale ee Asian iyo Yurub iyo gobollada.